P6.25 Led ကြမ်းပြင်ကြွေပြားများ Led Interactive Video Dance Floor - မိုးလုံလေလုံပြင်ပတွင် ဦး ဆောင်ဗီဒီယို display မျက်နှာပြင်ထုတ်လုပ်သူ
မိုးလုံလေလုံ / Semi- ပြင်ပက ဦး ဆောင်အကအခုန် ဦး ဆောင် display ကိုညဥ့်ကလပ်များအတွက်အထူးလျှောက်လွှာထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်, ဒစ္စကို, မော်ဒယ်ပြပွဲ, အော်တိုကားပြပွဲ, စျေးဝယ်စင်တာ, အနီရောင်ကော်ဇော, မင်္ဂလာဆောင်ကော်ဇော, စသည်တို့. သင်ခြေထောက်နှင့်ထိသောအခါဤအမိုးလုံလေလုံ ဦး ဆောင်သောဗီဒီယိုကခုန်ကြမ်းပြင်ကိုအထောက်အကူပြုသည်.
P4.81 P6.25 P8.928 P10 Led Floor Tile Panels Panels Led Interactive Video Dance Floor
LED Interactive Video Dance Floor ၏ထူးခြားချက်များ
1. မြန်ပြီးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်တပ်ဆင်: တိုက်ရိုက်တပ်ဆင်ခြင်းသို့မဟုတ်ရထားလမ်းတပ်ဆင်ခြင်းကိုအသုံးမပြုပါ.
2. မြင့်မားသောဝန် - ဆောင်သောစွမ်းဆောင်ရည်: မြင့်မားတဲ့ဝန်စွမ်းရည်နှင့်အတူ 1.5 စတုရန်းမီတာလျှင်တန်ချိန်.
3. Excellent ကပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစွမ်းဆောင်ရည်: ဒါကြောင့်ကပ်လျက်သေတ္တာများမဖယ်ရှားဘဲတိုက်ရိုက်လဲလှယ်နိုင်ပါတယ်
4. မြင့်မားသောဆန့်ကျင်ဘက်ဒီဇိုင်း: နည်းပညာဒီဇိုင်းမျက်နှာဖုံး, ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကစားအကျိုးသက်ရောက်မှု
5. ကောင်းမွန်သောအနိမ့်အရောင်နှင့်မြင့်မားသောပြာမှုန့်အကျိုးသက်ရောက်မှု, မီးခိုးရောင်တစ်ပုံစံတည်းနှင့်ကောင်းသောရှေ့နောက်ညီညွတ်မှု၏တူညီမှုကိုဖေါ်ပြခြင်း
Led Dancing ကြမ်းပြင်သည်အလေးချိန် ၁၀၀၀ ကီလိုဂရမ်ကျော်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်, တာရှည်ခံပစ္စည်းမှလွဲ, ထို့အပြင်အလူမီနီယံလုံခြုံခဲရထားလမ်းလိုအပ်ပါတယ်, ကျေးဇူးပြုပြီးအောက်ပါအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုစစ်ဆေးပါ. ယခုမီးထွန်းရန် ဦး ဆောင်သည့်အကဖြင့်ကြမ်းပြင်အတွက်အဓိကအလူမီနီယံခဲရထားလမ်းနှစ်ခုရှိသည်, ပထမတစ်ခုမှာဗီဒိုအောက်ရှိလူမီနီယမ်အချပ်ဖြစ်သည်, ဤသည်သည်ရိုးရာအစဉ်အလာကိုစုစည်းရန်နှင့်ပံ့ပိုးရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ရိုးရာနည်းလမ်းဖြစ်သည်; ဒုတိယပတ်ပတ်လည်ခဲရထားလမ်းဖြစ်ပါတယ်, ဤသည်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာခြင်းနှင့်လုံခြုံသည်, ကခဲရထားလမ်း updated ဖြစ်ပါတယ်. သင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာအတိုင်းရွေးချယ်နိုင်သည်.
ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံ၌ပြင်းထန်သောစမ်းသပ်မှုပြီးနောက်၎င်းသည်စတုရန်းမီတာလျှင် ၅၀၀ ကီလိုဂရမ်ကိုထပ်မံထောက်ပံ့နိုင်သည်. 100 ကခုန်သူသည်တစ်ချိန်တည်းတွင်ကခုန်နိုင်သည်. ထို့အပြင်ဘီယာဖိတ်ခြင်းကိုတားဆီးရန်အပြင်ဘက်တွင်ရေစိုခံနိုင်သည့်အဆင့်ဖြစ်သည်, ကော်ဖီ, သောက်ပါ, ရေ, စသည်တို့. အထိခိုက်မခံသော led dance floor ကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည်, သငျသညျမျက်နှာပြင်ကိုဆေးကြောဖို့ရေပိုက်ယူနိုင်ပါတယ်.